The Voice Of Somaliland: Go'aan ay soo saareen gudidda nabad galyadda ee Gobolka Sool.
Go'aan ay soo saareen gudidda nabad galyadda ee Gobolka Sool.
(Waridaad) - Waxaa maanta xafiiska shabakada afnugaal.com ee magaalada Laascaanood soo gaadhay nuqul kamid ah go'aan ay maanta soo saareen gudida nabad galyada Gobolka Sool kaas oo ay kaga hadlayaan xaalada guud ee nabada galayada Gobolka.
Gudida nabad galyada Gobolka Sool ee Somaliland.
Amar kasoo baxay gudida nabad galyada Gobolka Sool......Sii akhri